Izindaba - Amabhakede ethu we-Excavator-Aqinisekisa ikhwalithi nokuqina
Amabhakede ethu we-excavator-Aqinisekisa ikhwalithi nokuqina
XUZHOU MINYAN UKUNGENISA NOKUTHUTHELISA CO., LTD. etholakala edolobheni lemishini yokwakha elidume kakhulu eXuzhou, eChina. Njengomshini wobungcweti wokwakha nezingxenye zokungcebeleka, uMinyan unesipiliyoni seminyaka eminingi sokumaketha imishini yokwakha eChina, sinolwazi oluningi nezinsizakusebenza zangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa nangemva kwensizakalo yokuthengisa, futhi sivunyiwe yi-Export Right nguhulumeni waseChina, ifilosofi yethu yebhizinisi "Ukuthembeka, Ubuqotho, Ukuphelela" - Ithemu le-CIP.
Ububanzi bebhizinisi: Imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni ahlukene angama-80; faka i-Australia, i-American, iNgilandi, iPoland, iRussia, i-India, amazwe amakhulu e-Afrika, Mid-Asia, Southeast Asia njll.
1. Ifektri yethu ikakhulukazi ikhiqiza i-EXCAVATOR ROCK BUCKET, i-EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, i-EXCAVATOR SIEVE BUCKET, i-BUCKET TEETH, i-EXCAVATOR RIPPER, i-EXCAVATOR COUPLER esheshayo, imikhiqizo yethu ifanele zonke izinhlobo zamamodeli we-excavator. Njenge-CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
2. Inkampani yethu futhi ukuthekelisa zibhonge imishini
(1) wokubacindezela ngokugcwele auto crane, isisindo max ephakamisa kusuka 8 ton kuya 160 ton.
(2) I-hydraulic ngokugcwele yonke indawo yezwe crane, isisindo esikhulu sokususa kusuka ku-25 ton kuye ku-1200 ton.
(3) abakhasi crane, ubukhulu bokuphakamisa izinsimbi kusuka ku-35-ton 2000 ton
(4) I-tower crane (i-jib evundlile; i-jib ehambayo), ukuphakama okuphezulu kusuka ku-4 kuye ku-50ton. Yonke imodeli ingabona okumile, okungaphansi kwenqola, ukuhamba nokunamathiselwe kwesidingo sakho sokwakha.
3. Iroli yomgwaqo, isisindo esisuka ku-0.8 ton kuya ku-30ton. Kubandakanya isigubhu esiphindwe kabili, iroli yendlela edlidlizelayo, isigubhu esisodwa nesiroli somgwaqo esidlidlizayo, iroli yomoya womoya.
4. I-asphalt ne-paver kokhonkolo, ububanzi bokusebenza kusuka ku-2.0m kuye ku-14m.
5. Isilayidi se Wheel, umthamo wamabhakede kusuka ku-1 ton kuya ku-12 ton. Ibhakede ivolumu kusuka ku-0.5 cbm kuye ku-6.5cbm
6. I-Bulldozer kusuka ku-80hp kuye ku-520hp
7.I-Crawler Excavator nevolumu yebhakede yebhagi esukela ku-0.044cbm kuye ku-6cbm.Isisindo sokusebenza sisuka ku-1.64t kuye ku-90t
8. I-Motor Grader kusuka ku-102hp kuye ku-535 hp.
9.Imishini ekhonkolo njenge-mixer yeloli kusuka ku-6cbm kuye ku-14cbm, ipompo likakhonkolo lisuka ku-37m boom laya ku-56